TPLFiin Naanno Tigraayitti,Haala Boordii Filannoo hirmaachiseen Sadarkaa Naannootti Filannoo geggeessuuf kan deemaa jiru ta’uu ibsee jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsTPLFiin Naanno Tigraayitti,Haala Boordii Filannoo hirmaachiseen Sadarkaa Naannootti Filannoo geggeessuuf kan deemaa jiru ta’uu ibsee jira.
PPiin ammoo “Ibsi Maqalee irraa kennamu,Kan Namoota Fayyaa qabaniin kennamaa jiru hin fakkaatu” jechuun dubbata.
Lameenuu Yeroo rakkoo keessatti wal argatanii jiru.
TTPLFiin kan Filannoo ammaatti Cichan waan Lamaafi:-
1. Fulbaana 30 booda,Aangoo Sadarkaa Naannootti itti hirkatee jiru kana utuu hin dhabin filannoo geggeessuun Aangoo dheereffachuudhaafi.
2. TPLFiin Paartii PP keessaa bahe waan ta’eef,PPiin Naannoo Tigraayi keessatti akka Paartii morkataatti kan dorgomudha. PPiin gama tokkoon Filannoo gara fuulduraatti N. Tigraayitti geggeeffamu irratti dorgomuuf kan of qopheessaa jiru yoo ta’u,gama kaaniin Mootummaa Naannichaa diiguun karoora isa duraati. Kanaaf ammoo akka carraa tokkootti kan isaan eeggatan,Yeroon Aangoo Mootummaa Naannichaa hanga dhumuttidha. Garuu PPiin Filannoon kan amma geggeeffamu yoo ta’e Filannoo sanatti hirmaachuu hin danda’u. TPLFiinis kana Waan beekaniif,Filannoon kun yeroo PPiin itti hirmaachuu hin dandeenye kanatti raawwachuuf murteeffatanii jiru.
Gama kaaniin,Filannoon TPLFiin Yeroo idilee isaatti geggeessuuf deeman heera mootummaa kan faallessu miti. Garuu dubbiin kana waliin ka’u,Dhimma Boordii Filannootiin wal qabatudha. Filannoon akkaataa Heera Mootummaatiin geggeeffamuudhasf,Boordiin filannoo raawwachiisu jiraachuu akka qabu Heerri mootummaa nituma. Boordikn kunis Labsiidhaan dhaabbatee jira. TPLFiinis Boordii Filannoo ni hirmaachifna jechaa jiru. Garuu Boordiin Gilannoo yoo hirmaachuu dide maaltu ta’a? Kan jedhu wal gaafachiisaadha.
Mee xumura isaa ni ilaalla!!!
Rakkoo Siyaasaa Amma Itiyoophiyaa Mudateef Furmaatni Jaarmayaa Biyyaalessaa Waloo Hundeessuu Dha, Jedha Gamtaan Medrek
Walittiqabaa Medrek, Proofesar Mararaa Guddinaa
FINFINNEE — (voaafaanoromoo)—-Kongirasii Federaalawaa Oromoo dabalatee dhaabileen 5 kan keessatti argaman Gamtaan Medrek rakkoo seeraa fi siyaasa Itiyoophiyaa mudateef furmaanni jarmaya biyyaalessa kan hunda hirmaachis hundeessuu dha, jedha.
Haala filannoon itti geggefamuu fi hegeree hoggansa siyaasaa biyyatti irrattis yaada falaa dhiheessu isaa Walittiqabaan Medrek, Proofeesar Marara Guddinaa VOAtti himanii jiru.
Gaaffii fi deebii Proofesar Maraaran waliin geggeessine guutummaa isaa caqasaa.